Kooxo Hubeysan oo Gaalkacyo ku dilay Mas’uul ka tirsan Maamulka Puntland – STAR FM SOMALIA
Wararka ayaa sheegaya in Isku duwaha lagu dilay xaafada Garsoor ee waqooyiga Gaalkacyo, iyadoo dableydii ka dambeysay ay baxsadeen.
Ciidamada ammaanka ayaa howl gallo ka sameeyay halka uu dilka ka dhacay, balse uma suura gelin inay soo qabteen kooxihii dilka ka dambeeyay.
Dilkan ayaa noqonaya kii labaad oo ka dhaca waqooyiga Gaalkacyo, inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, iyadoo horay waqooyiga Gaalkacyo loogu dilay Guddoomiyihii ururka haweenka Gobolka Mudug.
Magaalada Gaalkacyo oo u qeybsan labo dhinac oo ay kala maamulaan Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa ku soo badanayay dilal qorsheysan, waxaana inta badan dilalka ka dhacayeen dhanka waqooyi ee Puntland maamusho.
Diyaarado dagaal oo duqeyn ka geystay Gobolka Gedo
Wararkii ugu dambeeyay dilkii Taliyihii Nabadsugida Sh/Dhexe iyo Al-Shabaab oo sheegatay
Wararka46 mins ago
Wararka53 mins ago